Cho Cho Lwin's Likes - Myanmar Network
Cho Cho Lwin's Likes
Back to Cho Cho Lwin's Page
ရှုခင်းဝေါဟာရများ ကမ္ဘာကြီးမှာ လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေ နေရာအနှံ့မှာ ရှိပါတယ်။ ရှုခင်းတွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်မယ့် ဝေါဟာရတွေကို စုံစုံလင်လင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။တောင်ကမ်းပါး Cliff တွေကို ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ မားမားကြီး တွေ့ရတတ… Discussion ရှုခင်းဝေါဟာရများ 95 Likes
Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ လွဲမှားမှုတွေ ။ “ချစ်သူ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “lover” လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲလိုပဲ လူတော်တော်များများသုံးနေကြတယ်။ love ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ချစ်တယ် တဲ့။ ဒါတော့ လူတိုင်းသိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ word/v… Discussion Love စကားလုံး၏ လွဲမှားမှုများ 396 Likes
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလ… ၁၁။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်ပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ စာတွေကိုဖတ်ပါ။ စာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ နားလည်လွယ်စေဖို့ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာ မဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ကိုေ… Discussion အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလ… 46 Likes Big City Small World (Series 1 Episode3- K… Series 1 Episode3- Kicked Out! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၃) နှင်ထုတ်ခံရပြီ) Harry sure is good at his job as he doesn’t come cheap! Harry က သူ့ရဲ့အလုပ်မှာတော့ ကျွမ်းကျင်တယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ခကလည်း ဈေးမပေါဘူ… Discussion Big City Small World (Series 1 Episode3- K… 38 Likes
ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ် (Reading & Vocabulary) လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်ကျော် ဗိုလ်တစ်ထောင်က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဧည့်ကြိုလုပ်ခဲ့တုန်းက ပြင်သစ်လူမျိုးဧည့်သည်တစ်ယောက် က Le Mot et L'idée ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်လက်ဆောင်ပေးသွားဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက… Discussion ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ် (Reading & Vocabulary) 61 Likes
သင်သိဖို့လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ခ… ၁။ အင်္ဂလိပ် grammar ကို အများကြီး မလေ့လာပါနှင့်။ ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။ သင်စာမေးပွဲ အောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ် g… Discussion သင်သိဖို့လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ခ… 101 Likes